Izindaba - Uyazi ukuthi ngabe isikrini sokuqala sithathelwe indawo lapho kulungiswa iselula? Ngena ngikufundise ukuthi ungabona kanjani isikrini sangempela nesikrini esingelona iqiniso
Imvamisa, sihlala sihlangabezana nesimo sokuthi isikrini somakhalekhukhwini siphukile ngengozi, amanye amacala aphukile ingilazi yengilazi, amanye isikrini sangaphakathi asibonisi naso siphukile. Umlungisi wenkampani yangaphandle uzokubuza ukuthi ufuna eyangempela noma ejwayelekile. Ngokuvamile, umehluko wamanani awumkhulu, okukukhomba ukuthi ubeke esikhundleni sokuqala. Kepha uyazi ukuthi isikrini asishintshile ngesokuqala yini? Umhleli omncane olandelayo ukufundisa ukuthi ungasibona kanjani isikrini seqiniso nesingamanga.
Okokuqala, sizokhuluma ngesikrini sangaphandle esilula. Njengoba sishilo, izikrini zoqobo ezivela kubakhiqizi ziyizinhlangano zesikrini. Ngakho-ke, okuthiwa izikrini zangaphandle zangempela azivamile ngokwedlulele. Umehluko phakathi kwangempela nokujwayelekile ezinkampanini eziningi zesondlo umehluko phakathi kwengilazi yendawo yangemuva nengilazi ejwayelekile, futhi kunezikrini zangaphandle zangempela ezimbalwa.
Ngokuvamile, isikrini esithathelwe indawo ngumshini we-Android sibi kakhulu. Uma sesiphukile, kungcono futhi. Ikhono lokuhlukanisa ukunaka ukushelela kwe-2.5D radian yomphetho wesikrini nenani lesendlalelo samanzi ka-oyela. Ngokuvamile, izingxenye ezine-radian engu-2.5D kusikrini sangaphandle esingesihle azibushelelezi futhi zibushelelezi kakhulu. Intengo yalolu hlobo lwesikrini iphakathi kuka-80 no-90. Isikrini esihle sibushelelezi futhi sibushelelezi, ungqimba kawoyela lukhulu, kepha intengo ngeke yeqe ama-yuan angama-300. Uma umuntu owenza inzuzo ekucela ukuthi ucele i-RMB 4500, ungahamba ngokushesha. Akunasidingo sokuyilungisa lapha. Ngenxa yokufunwa okukhulu nokuhlinzekwa okuphelele kwesikrini sangaphandle se-Apple, ikhwalithi yesikrini sangaphandle inhle kakhulu, ingaqhathaniswa nesikrini sokuqala, futhi inani alikho ngaphezu kwama-yuan angama-300.
Kusemakethe kuningi izikrini zoqobo emakethe zomhlangano wesikrini, ezenziwe ngeziteshi ezikhethekile ezahlukahlukene. Kunezinhlobo eziningi zezikrini ezingezona ezangempela, kufaka phakathi isikrini sangemuva sengcindezi kufakwe ipuleti lekhava, isikrini sokuqala se-LCD ngentambo eshintshiwe eshintshiwe noma ilambu langemuva, isikrini sokulingisa esiphakeme, njll ngemuva kokufunda izinhlobo, ungakhuluma ngqo ngamakhono.
Kulezi zinsuku, omakhalekhukhwini abaningi yizikrini ze-OLED, ezibiza imali enkulu. Vele, intengo yokushintsha isikrini nayo iphezulu. Kodwa-ke, kunabaxhamli abaningi abanonya abangafuni ukufaka esikhundleni sakho isikrini sangempela, kepha babuye basibuyisele nge-LCD eyodwa lokhu okushibhile kwezinto ezibonakalayo, ngoba lokhu kungathi kuyasiza, isikrini singathola ngisho i-500 noma Ama-yuan angama-600, ngaphandle akubonakali, uma sihlangabezana nalokhu, singathatha ingilazi yokukhulisa ukukhomba.
Lungisa isikrini sibe sesikrini esimhlophe ngaphandle kombhalo noma iphethini ngangokunokwenzeka, futhi ubheke ukuhlelwa kwephikseli kwesikrini ngengilazi yokukhulisa. Njenge-iPhone X nangaphezulu, uchungechunge oluningi lwasekhaya luyilungiselelo le-Samsung pentale sub-pixel ye-Samsung, njengale engenhla.
IHuawei P30 pro no-mate 20 Pro ngamalungiselelo we-BOE “Zhou Dongyu”, nohlelo olujwayelekile lwe-LG, njengoba kukhonjisiwe kulo mfanekiso ongenhla,
I-LCD Yokufaka ihluke kakhulu. Iningi lazo lihlelwe ngokuhleleka okujwayelekile kwe-RGB. Njengoba kukhonjisiwe kulesi sibalo esingenhla, uma uthola ukuthi ifoni yakho ephathekayo ekuqaleni iyisikrini se-OLED futhi kwafakwa i-LCD yinzuzo, ungasebenzisa le ndlela ukuya kuye ngokushesha ukuze ulahlekelwe yimali.
Enye indlela ukukhomba ukuthi ngabe isikrini sangaphandle salo mhlangano ngesoqobo yini, njengale ndlela engenhla. Ngaphezu kwalokho, isikrini asikwazi ukuphakama kakhulu kunomngcele ngemuva kokushintsha isikrini. Ngokuvamile, umhlangano wesikrini okungesiwona owokuqala uzoba mkhulu kunowokuqala. Ngakho-ke kuzoba nokugqama.
Lokhu okungenhla kuyindlela yokwenzela wena. Ngiyethemba izokusiza.